Kubafundi nabazali Ukukhetha & Ukusebenzisa
I- Ivy League ngokwenene yinkomfa yezemidlalo yenkxaso yeqela lezemidlalo ukusuka kumaziko asi-8 aphakamileyo emfundo ephakamileyo. Kodwa ngaphaya kwezemidlalo ze-ekleji, i-Ivy League njengoko ininzi yethu siyayazi, yinto emalunga nemfundo ephakamileyo emfundo kunamaqela ezemidlalo. IiYunivesithi ze-Ivy League ziyaziwa ngokusemgangathweni ngokwemigangatho yazo yokumkelwa kwemigangatho yeenkqubo zabo ezingaphantsi. Ujika, isikolo somthetho asifani! Izikolo zomthetho we-Ivy League, zikhona ezintlanu zazo, kunzima ukungena kubafundi bezomthetho ngokunjalo. Unomdla kwi-Ivy League? Qinisekisa ukuba wenza kakuhle kwi-LSAT kwaye ube namabakala ase-stellar ngexesha lakho lemfundo. Ngaba ufuna ukufunda okungakumbi malunga nezikolo zomthetho we-Ivy League? Hlola ezi ziprofayili zesikolo zomthetho ngaphantsi.
School Yale Law
bpperry / Getty Izithombe
Yale Law School, inxalenye yeYunivesithi yaseYale kunye neNew Haven, Connecticut, isetyenziswe kwisikolo somthetho weNombolo 1 yi-US News kunye neNgxelo yehlabathi ukususela kumaphephancwadi. Umlinganiselo wokwamkelwa komthetho we-Yale ngowama-6.9 ekhulwini kunye nomthetho omncinane kakhulu wesikolo, kunye nabafundi abangama-600 kuphela. Isifundo si malunga ne-56,000 zamawaka ngonyaka. Akukho nqongophala yabalandeli beYale abadumileyo, kuquka uMongameli uBill Clinton, uHillary Clinton, kunye neeNkundla eziPhakamileyo zeNkundla. Kaninzi "
Pgiam / Getty Izithombe
I-Harvard Law School (HLS) yinxalenye yeYunivesithi yaseHarvard eCambridge, eMassachusetts. Kwakhona likhaya kwikharityhulam ephakamileyo yamatyala ehlabathini (iindaba ezonwabileyo)! Okwangoku kubekwe kwiNombolo yesi-2 kwi-News ye-US ne-World Report rankings. Akukho nqongophala yabalume abadumileyo baseHarvard kuquka uMongameli uBharak Obama kunye nezoNkundla eziPhakamileyo zeNkundla. Kukho abafundi abangama-1700 abaya kwi-Harvard Law kwaye baya kuhlawula imali engama-55,000 ngonyaka ukuya kuzo. Kaninzi "
UDennis K. Johnson / Getty Izithombe
Ngaba ufuna ukuya esikolweni somthetho kwisixeko saseNew York? Columbia ingaba kuwe! Umthetho wesikolo unamalungu amaninzi ahloniphekileyo kuquka iNkundla ePhakamileyo yeRute uRuder Ginsburg. Kubekwe kwiNombolo ye-4 kwi-News News ye-US kunye neNgcaciso yeNhlaba yeeNkcukacha zeSikolo. I-Columbia inebafundi abangaba ngu-400 kwiklasi nganye yeklasi kunye neendleko malunga needola ezingama-60 000 ngonyaka ukuya kuzo ( qi ni sekise ukuba uceba ucwangciso !). Kaninzi "
IYunivesithi yasePennsylvania Law School
UMargie Politzer / Getty Izithombe
Kukho entliziyweni yeFiladelphia, iYunivesithi yasePennsylvania Law School inxalenye yeYunivesithi yasePennsylvania kwaye njengamanje ibekwe njengeNombolo 7 kwi-News ne-World Report Reportings. Isantya sawo sokwamkela siyi-16 ekhulwini.Siyinye isikolo semfundo esincinci esinabafundi abayi-800 kuphela kwisikolo sonke. Kuya kuba neendleko malunga nama-56,000 amawaka ukuya kuzo. Kaninzi "
School of Law Cornell
UDennis Macdonald / Getty Izithombe
Ikhutshwe kwiNew York yaseNew York, iSikole soMthetho weConell iyingxenye yeYunivesithi yaseConell kwaye iyaziwa kakhulu kwiinkqubo zayo ezisemthethweni zomhlaba wonke. Okwangoku i-Nombolo 13 kwi-News ye-US News kunye ne-World Report Reportings kunye nezinga lokuwamkelwa kweepesenti ezingama-21. Isikolo esincinane esinabantu abangama-600 kuphela. I-Cornell iya kuhlawula i-$ 60,000 ngonyaka. Kaninzi "
Iindawo ezili-10 zokufumana Imibuzo yesampuli ye-LSAT kwi-Intanethi